Style Guide – Studio Art cAMPUS
A style guide or manual of style isaset of standards for the writing, formatting and design of documents. A style guide establishes standard style requirements to improve communication by ensuring consistency both withinadocument, and across multiple documents.
Image of the Styling Processing stage
Fashion Styling တစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့အနေနဲ့ သိသင်တဲ့ အကြောင်းရာတွေကတော့ Mood board ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ အများကြီး knowledge လိုပါတယ်။ Collect ပြုလုပ်တဲ့အခါ color ရယ် concept ကို တွဲမိဖို့လိုပါတယ်။
Style Type တွေ အများကြီးထဲ ကမှ ကိုယ်ရဲ့ Theme ကို ဖော်ပြတဲ့ အခါ လိုက်ဖက်အောင် balance ကျကျ ချပြဖို့ဆိုတာကတော့ Stylist တစ်ယောက်ရဲ့ knowledge and Experience နှစ်ခုလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ လွယ်တယ် လိုထင်ရပင်မဲ့ Creativity တစ်ခု အဖြစ်ဖန်တီးမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ အချက်လေးတွေ သတိထားရမှာပါ။
၁ ။ thinking စဉ်စားမှုအရင်ပြုရမှာပါ။
၂။ Research date collect လုပ်ရမှာပါ။
၃။ concept ရပြီဆို moonboard ပြုလုပ်ရမှာပါ။
အခု စဉ်စားရမဲ့ Stage လေးတွေကို step by step ပြုလုပ်ရမှာပါ။ စဉ်စားပုံ Origin ဖြစ်ဖို့ အတွက် စနစ်တကျ လေ့လာ လေ့ကျင့်ဖို လိုပါတယ်။
ကယ် အခုလောက်ဆိုရင်တော့ Style တစ်ခု Editorial တစ်ခု ဖန်တီးမှုမှာ အဓိက ကျတဲ့ အချက်လေးတွေ သိရပြီထင်ပါတယ် ။
Third-Gen ရဲ့ Fashion Stylist & Image Consultant one year Course ကို လေ့လာ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ FASHION DESIGN AND MARKETING FOUNDATION COURSE အနေနဲ့လဲ သင်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။ အောက်ပါ links ကနေ လေ့လာလို့ရပါတယ်။